पीएचडी गरेपछि कक्षा ४ को जाँच ! अनि राजा वीरेन्द्र हाँसे
दिनेश गौतम काठमाडौं, १० फागुन
लहरै कोठा । झट्ट हेर्दा स्कुलको कोठाझैँ लाग्ने तर घर सुनसान छ । वरिपरि बगैँचा । रङ्गीचङ्गी फूलहरू फुलेका छन् ।
कोठाको भित्तामा झुन्ड्याइएको छ, तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले दिएका तक्मा र फोटो । मुसुक्क मुस्कुराएका छन्, राजा वीरेन्द्र फोटोमा । भित्तामै झुन्ड्याइएको छ, केही सम्मानपत्र अनि परिवारको फोटो ।
नारायणहिटी दरबारको दक्षिण ढोका नजिकै रहेको डा. ताराकेशरी राजभण्डारीको घर हो यो । नारायण्हिटीको बाँस झ्याङमा कराएको चराको मधुर आवाज ताराको घरमै सुनिन्छ ।
तिनताक काठमाडौं सुनसान थियो तर हरियाली, रमाइलो वातावरण । आजको जस्तो कोलाहल थिएन । काकाकुल शहर थिएन । ईन्द्रचोक र असनमा दिउँसै पनि हिँड्न डरमर्दो थियो ।
ईन्द्रचोक र असनको बीचमा रहेको केल टोलमा सन् १९४१ को चिसो दिनमा ताराले यस धर्तीमा पहिलो सास फेरेकी हुन् ।
७९ वर्षअघिको काठमाडौंको चित्र ताराको मानसपटलमा अहिले पनि घुमिरहन्छ ।
आहा ! कस्तो रमाइलो काठमाडौं ।
प्रेरणाको स्रोत बुबा
छोरीहरूलाई पढाउनुहुँदैन भन्ने समाज । तर, ताराका बुबा उदार थिए । छोरा र छोरी समान हुनुपर्छ । किन छोरीलाई नपढाउने ? भोलि छोरा जन्माउने छोरीले होइन ? आधा आकाश ओगटेका नारीले किन पढ्न नहुने ?
ताराका बुबा परिवर्तन चाहन्थे । त्यसैले उनले तारा ७ वर्षकी हुँदा शान्ति निकुञ्जमा भर्ना गरिदिए । ताराले शान्ति निकुञ्जबाट कखरा सिकिन् । उनी पढ्ने समयमा किताब, कापी आइसकेको थियो तर उनले स्लेटमा लेखेर पढिन् । बाँसको कलमले लेखेका दिन आज पनि ताराको स्मृतिमा छन् ।
तारा स्कुले जीवनमा आफूलाई पु¥याउँछिन् । सम्झिन्छिन् साथीसङ्गीसँग बिताएका अतीतका ती रमाइला स्कुले दिन ।
त्यो बेलाको बजार
त्यतिबेलाको बजार सस्तो थियो तर पैसा महँगो थियो । आज ठीक उल्टो भएको छ । बजार भाउ अकासिएको छ । ताराले खसीको मासु धार्नीको ८ रूपैयाँ, अन्डा १२ पैसामा किनेको सम्झना छ ।
सुन तोलको २ सय रूपैयाँ, चाँदीको २ रुपैयाँसम्ममा उनले किनेको याद छ ।
‘ओहो ! अहिलेको बजारले त मन नै झसङ्ग हुन्छ । अहिलेका पुस्तालाई कथा सुनाएजस्तो लाग्ने’, तारा सम्झिन्छिन् ।
कक्षा ७ बाट उनी पद्मकन्यामा पढ्न थालिन् । पद्मकन्याबाट २०११ सालमा ताराले फलामे ढोका पार गरिन् । अर्थात् उनले एसएलसी उत्तीर्ण गरिन् ।
त्यस दिन सबैभन्दा बढी उनका बुबा खुसी थिए । बुबा खुसी भएको देख्दा तारा पुलकित हुन्थिन् ।
डाक्टर पढ्न ब्रेक
एसएलसीपछि तारा आईएस्सी पढ्न थालिन् । बुबाको सपना छोरी डाक्टर बनोस् भन्ने । त्यसैले ताराले साइन्स पढिन् । तर, आईएस्सी थर्ड डिभिजनामा पास भएकाले ताराले साइन्स पढ्न पाइनन् ।
छोरीलाई डाक्टर बनाउने बुबाको सपनामा ब्रेक लाग्यो । त्यसपछि उनले बीएस्सी पढिन् ।
बुबाको डाक्टर बनाउने सपना पूरा नभएकामा तारा पनि भावुक बनिन् ।
डाक्टर पढ्न नपाएपछि उनी एमएस्सी पढ्ने भइन् तर नेपालमा एमएस्सी पढाइ थिएन । त्यसैले उनी भारतको पटना विश्वविद्यालयमा एमएस्सी पढ्न गइन् । पढ्नका लागि प्रेरणाका स्रोत नै उनका बुबा थिए ।
उनी बुबाप्रति कृतज्ञ हुन्छिन् ।
एमएस्सीपछि उनी नेपाल फर्किइन् । २०२१ सालमा उनले वनस्पति विभागमा काम गर्न थालिन् । एमस्सीपछि छोरीले पीएचडी गरोस् भन्ने बुबाको इच्छा थियो । उनको विवाह पनि भयो ।
ताराका श्रीमान् बेलायत पढ्न गएका थिए । उनी पनि गइन् । ताराले बेलायतबाट डबल एम्एस्सी गरिन् ।
एक दिन बेलायतमा नेपालका बारे भन्नुपर्ने भयो । उनले नेपालबाट कार्ड मगाइन् । पहाडमा भरियाले भारी बोकेको कार्ड बुबाले पठाएका थिए ।
त्यो कार्ड देख्दा बेलायतीहरू मोहित भएका थिए ।
ताराले बेलायतबाट डबल एमएस्सी गरेपछि फेरि नेपाल फर्किइन् । बुबाले फेरि पीएचडी गर्न सुझाए । ताराले सरकारको अनुमति नलिई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पीएचडीका लागि आवेदन दिइन् ।
उनी वनस्पति विभागको जागिरे भएकाले अध्ययन बिदा लिनुपथ्र्यो तर बिदा स्वीकृत नगरी आवेदन दिएको भनेर सरकारले बिदा दिन मानेन । बुबाले सबै ठाउँमा भनेर अन्ततः बिदा मिलाए । त्यसपछि उनले पीएचडी गर्ने बिदा पाइन् । अवकास हुने समयमा उनले वनस्पतिशास्त्रमा विद्यावारिधि अर्थात् पीएचडी पूरा गरिन् ।
बुबाको सपना पूरा भएकामा तारा हर्षित देखिइन् ।
आमाले दशैँमा टीका लगाउँदा तारालाई सधैँ ‘महानिर्देशक बन्नू’ भनेर आशीर्वाद दिन्थिन् । २०४६ सालको आन्दोलनपछि उनको नाम महानिर्देशकका लागि मन्त्रालयमा गएछ ।
त्यसपछि उनी वनस्पति विभागकी महानिर्देशक बनिन् । ३ वर्षसम्म महानिर्देशक भएपछि उनको वन मन्त्रालयमा सरुवा भयो ।
तर, जागिरकै क्रममा वनस्पति विभागको जग्गा प्रसूतिगृहले लिन खोज्दा, सङ्गठनको समस्या र कार्यसम्पादनमा नम्बर नपाउँदा उनको बढुवासमेत रोकियो । त्यसमा मुद्दासमेत लडिन् । अन्ततः उनले मुद्दा हारिन् ।
सम्मान र तक्मा
राम्रो काम गरेको भन्दै ताराले सम्मानसमेत पाएकी छन्, गोरखा दक्षिणबाहु । एमएस्सीमा प्रथम भएको तक्मा । राजा महेन्द्रबाट एमएस्सीको तक्पा र वीरेन्द्रको शुभराज्यविशेषकको अवसरमा तक्मा पाएकी छन् ।
यी सम्मान र तक्मा कोठामा सजाएर राखेकी छन् उनले ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले एमएस्सीको तक्मा हातमा दिएका थिए उनलाई । पछि वीरेन्द्रको समयमा पनि उनले तक्माका लागि हात थापेकी थिइन् तर वीरेन्द्रले भने लगाइदिन खोजेका थिए । ३ पटकसम्म अलमल भएपछि राजा वीरेन्द्र मुसुक्क हाँसेका थिए ।
त्यही फोटो उनको कोठाको भित्तामा छ ।
श्रीमानको मृत्युपछि एक्लिइन्
अवकास भएपछि के गर्ने ? दिन कटाउन मुस्किल । अनि धागो बत्ती काड्ने, लाख बत्ती बाल्ने । विपश्यनामा ध्यान गर्न थालिन् ।
साथी केशरीको सहयोगमा उनी विपश्यना गएकी थिइन् । श्रीमानले ध्यानमा नजाऊ भनेका थिए तर उनी थाहै नदिई गएकी थिइन् । त्यसपछि श्रीमानको मृत्यु भयो ।
श्रीमानको मृत्यु भएपछि उनलाई पश्चात्ताप लाग्यो ।
श्रीमानको मृत्युपछि उनी एक्ली भइन् । साथी केशरीको साथ र सहयोगमा उनी फेरि ध्यानमा जान थालिन् ।
बुद्ध शिक्षामा रुचि
दिनहरू बित्दै गए । उनलाई बुद्ध शिक्षा अध्ययन गर्न मन लाग्यो । सुन्दरीलक्ष्मी शाक्यको सहयोगमा उनी विश्व शान्ति बिहारमा गएकी थिइन् ।
उनी २०७३ सालमा बुद्ध शिक्षा पढ्न कक्षा १ मा भर्ना भइन् । कक्षा १ मा ७७ प्रतिशत अंक ल्याएर उत्तीर्ण भइन् उनी । अहिले ४ कक्षाको परीक्षा दिएर बसेकी छन् ।
अब ५ कक्षा पढ्ने तयारीमा छन् तारा ।
‘५ कक्षाको परीक्षा दिएर छोरीलाई भेट्न क्यानडा जाने सोच छ’, तारा भन्छिन्, ‘क्यानडाबाट फर्किएपछि कक्षा ६ मा पढ्छु ।’
मसिनो स्वर, लर्बरिँदो आवाज र चाउरी पर्दै गएको छालाले जीवनको उत्तराद्र्धको संकेत गर्छ । ७९ वर्ष पुगेकी ताराको हिम्मत र आँटलाई भने मान्नैपर्छ ।
बुद्ध शिक्षा १० कक्षासम्म पढ्ने उनको रहर छ ।
‘बुद्धको उपदेश मनपर्ने भएकाले पढेकी हुँ । १० कक्षासम्म पढ्ने सोचेकी छु’, तरा भन्छिन्, ‘अब कति पो समय बाँचिएला र ! हात खुट्टा चलेसम्म त पढ्ने हो ।’
ताराले १० भन्दा बढी देशको भ्रमणसेमत गरेकी छन् । भारत, अमेरिका, श्रीलङ्का, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम, अस्ट्रिया, चीन, बर्मा, थाइल्याण्डलगायतका देश ताराले भ्रमण गरेकी छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १०, २०७६, ०९:२०:००